एसिड प्रहार गरेको शंकामा घाइतेका कुरुवा नै प्रहरी फन्दामा
काठमाडौँ, १ असोज । रौतहटबाट एसिड आक्रमणमा परेर उपचारार्थ काठमाडौं ल्याइएका दुई किशोरीका कुरुवा नै अस्पतालबाट पक्राऊ परेका छन् । एसिड आक्रमणमा परेका दुई दिदीबहिनी सम्झना र सुस्मिता दासलाई अस्पतालमा कुर्न आएका उनीहरुका छिमेकी रामबाबु पासवानलाई प्रहरीले
यी हुन् हस्त मैथुन मन नपराउने चर्चित नायिका
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री सोनम कपूरले आफ्नो बेडरुमका सेक्रेटहरूको खुलासा गरेकी छिन् । बेडरुममा बत्ति निभाएर सुत्न मन नपर्ने सोनम कपूरले बताएकी छिन् । ‘हामी जे गर्छौं, बत्ति बालेरै गर्छौं’, उनले भनिन् । बत्ति निभाउँदा आफूलाई सकस हुने उनको भनाई छ । उनलाई
निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानबारे यसो भन्छन् गृहमन्त्री थापा
काठमाडौं, १ असोज । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले महिला हिंसा र बलात्कारका घटना न्यूनीकरणका लागि गृह मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितका
काठमाडौं, १ असोज । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले यौन व्यावसायलाई वैधानिकता दिएर कर असुली गर्नुपर्ने बताएपछि यो बहसको विषय बन्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङको आशय यौन पर्यटनलाई केन्द्रिकृत गरी कर उठाउने थियो । विश्वमा यौन
उपत्यकामै हरेक दुई दिनमा एक बलात्कार
काठमाडौं । उपत्यका भित्रपनि देशभरकै जस्तो बलात्कारका घटना अत्याधिक बढेको पाइएको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बलात्कारका घटना बढेको देखिएको छ । भदौं महिनामा उपत्यका भित्र मात्र १६ महिला बलात्कृत भएका छन् । साउनमा २६ बलात्कारका घटना भएका
बि.सं.२०७५ साल आश्विन ०१ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस् ! आजको पञ्चाङ्ग –सहित
वि.सं. २०७५ आश्विन ०१ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१८ सेप्टेम्बर १७ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३८, (ञलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:४९ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:०६ बजे, इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय :
रिहान्नाको फेसन शोमा गर्भवतीहरू
न्युयोर्क । गायिका तथा अभिनेत्री रिहान्नाले न्युयोर्क फेसन विकमा विविधता ल्याएको भन्दै प्रशंसा बटुलेकी छिन् । ३८ वर्षीया डिजाइनर रिहान्नाले न्युयोर्कमा सेभेज एक्स फेन्ट समूहबाट गर्भवती तथा विभिन्न समुदायका महिलालाई सहभागी गराएकी थिइन् । समूहमा बेल्ला र
बलिउड अभिनेता गोविन्दा काठमाडौंमा, नेपाली फिल्म खेल्ने
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता गोविन्दा अहुजा छोरी टिना अहुजासँगै काठमाडौं आइपुगेका छन् । नेपाली चेली सुनिता राणासँग बिहे गरेका गोविन्दालाई नेपालको ज्वाई मानिन्छ । उनी बेलामौका घुुम्न र तिर्थाटनका लागि नेपाल आउने गरेका छन् । शनिबार छोरीसहित काठमाडौं उत्रिएका
काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकामा तीन वर्षमा मोनोरेल सञ्चालनमा आउने भएको छ । मोनोरेल सञ्चालन गर्नेबारे काठमाडौं/ललितपुर महानगरपालिका र चीनको निर्माण कम्पनी चाइना रेलवे कन्सट्रक्सन कर्पोरेसन (सिआरसिसी) बीच प्रारम्भिक सम्भाव्यता प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भएको छ
किशोरी बलात्कार र हत्या प्रकरण : कञ्चनपुरमा फेरि आन्दोलन
कञ्चनपुर । निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै महेन्द्रनगरमा फेरि आन्दोलन सुरु भएको छ । घटना भएको ५२ दिनसम्म पनि अपराधी पत्ता लाग्न नसकेपछि स्थानीयले आन्दोलन थालेका हुन् । भदौ ७ र ८ गते चर्किएको आन्दोलन एसपीसहितका प्रहरी अधिकारी परिवर्तन गरिएसँगै
निर्मलाका लागि उर्लियो मानव सागर, डिएसपीसहित ६ प्रहरी आजै निलम्बित, गृह प्रवक्ता लाईभ !(भिडियोसहित)
‘सीधाकुरा जनतासँग’ / रबि लामिछाने / न्यूज २४ टेलिभिजन / जनाह्तामा जारी सब्यदृश्य साभार काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज २७६ औं एपिसोड हो । आजको यस एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ
५२ दिनसम्म पाइएन न्याय, देशभर विरोध प्रदर्शन जारी
काठमाडौं । १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ५२ दिन पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म निर्मलाको हत्या कसले गरेको हो भन्ने पुष्टि हुन नसक्दा घटना थप उग्र बन्दै गएको छ । निर्मलाको हत्यामा उच्चस्तरीय अनुसन्धान कमिटीले प्रहरीको लापरबाही भएको